Faroole weli kama qaan gaarin hadal xanaf leh oo keenikara kala fogaansho | raascasayrmedia.com
← Taliye Kuxigeenka Birmadka Booliiska Somaliland Oo Lagu Dhaawacay Bartamaha Laascaanood
Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada baladwayne →
April 30, 2011 · 3:42 am
Faroole weli kama qaan gaarin hadal xanaf leh oo keenikara kala fogaansho
Waxaa maanta magaalada Boosaaso soo gaaray Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole. Madaxweynaha ayaa isla maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta Madaxtooyada ee Boosaaso.
Mr. Faroole oo ka hadlay arimo fara badan ayaa xooga saaray eedayn uu u jeediyey kooxo kala duwan, wuxuuna dilalka qorashaysan iyo qaraxyada ka dhaca Puntland ku eedeeyey Al-shabaab, DFKMG ah iyo kooxo reer Puntland ah oo labadaas dhinac la shaqayya. Faroole wuxuu carabka ku adkeeyey in kooxaha kor ku xusani ka soo horjeedaan jiritaanka, nabada iyo horumarka Puntland.
Hadalka Madaxweynaha ayaa wuxuu ahaa mid xanaf leh oo uu ku deedafeeyey dhinacyada uu eedaha u u jeedinayey gaar ahaan Ururka SSC, Kooxo uu sheegay in ay ka soo jeedaan Sanaag iyo kuwo uu ku tilmaamay in ay warbaahinta ka sheegtaan maamulo aan jirin, hadalka aadka loola yaabay ayaa wuxu ahaaa isagoo yiri SSC waxay doonaysay in ay isku dhufato Puntland iyo Somaliland, iyadoo la ogyahay in Somaliland ay haysato dhul ka mid ah Puntland isla markaasna ay weerar gumaad ah dhowaan ku soo qaaday gobolka Cayn, waxaana wax laga naxo ah in Madaxweynaha Puntland oo ka baaqsaday difaaca gobolada Sool iyo Cayn uu isdifaaca dadka Gobolka Cayn ee la oo weeraray ku tilmaamo isku dhufasho Puntland iyo Somaliland. kooxaha uu maanta eedayyey waxaan ku jirin Somaliland oo dadka reer Puntland badankoodu u arkaan cadowga kowaad ee Puntland.
Hadalka Madaxweynaha ayaa waxaa ka muuqda in aanu weli ka qaan gaarin hadal xanaf leh oo wax sii kala fogeynaya, waxaana la filayey inuu Faroole khibrad iyo waay aragnimo ka kasbado 2di sano ee uu xilka hayey. Madaxweynaha ayaa waxaa sida cad ka maqan hanaanka wada hadalka, dulqaadka, isu tanaasulka iyo xal raadinta, isagoo taas bedelkeeda afla gaadho iyo eedayn saxaafada u mariya dadka mucaaradka ku ah siyaasadiisa ee reer Puntland, wuxuuna u hadlaa sidii ay hadlaan dadka ku sheekasysta fadhi ku dirirka. isagoo adeegsadaa kelmado aad u qalafsan oo mararka qaar lagu tilmaami karo aflagaadho iyo deedafayn. Waxaana muuqata in Faroole iyo Qaddaafi ay isga egyihiin hadalka xanafta leh ee aan loo meel dayin
Dhowaan ayey ahayd markii uu Faroole afla gaadho u geystay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda mid ka mida beelaha Gobolka Bari xilli ay kulan kula yeesheen xarunta madaxtooyada Garoowe halka kuwa kalena uu diiday inuu la kulmo, waxaana arintaas loo sababaynayaa maamulka dhowaan lagaga dhawaaqay degmada Baargaal ee lagu magacaabo Raasicaseyr State.
Dhinaca kale waxaa hadalka Faroole laga dheehan karaa inaan dawlada Puntland weli si dhab u garan cida gumaadka ku haysa waxgaradka Puntland maadaama oo uu DFKMG iyo Al-shabaab si isku mid ah ugu eedeeyay dhibaatada ka socota Puntland, iaydoo aan ognahay in labadan kooxood aysan isku qorshe iyo siyaasad ahayn.
guntii iyo gabagabadii, waxaa muuqata in markasta oo Madaxweyne Faroole uu hadlo uu hadlkiisu abuuro kala fogaansho iyo kalsooni daro. marka aan qiimayn ku samayno hadaladii uu muddooyinki dambe jeedinayey Madaxweyne Faroole waxaan oran karaa hogaaminta iyo maaraynta xaaldaha adag ee Puntland way mugweynta Mr. Faroole.